July 2020 - San Thitsa
Zawgyi နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါးမှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်များ မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးတတ်ချိန်များ (ကလေးသူငယ်များမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး) အားနည်းတတ်ချိန်များကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုသိရှိနိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ယတြာပိုင်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ
ရန်ကုန်၊ရန်ကင်းဆေးရုံက နပ်စ်မတွေကြောင့် အကြွေစောခဲ့ရတဲ့ သနားစရာ မေမေ့သမီးလေး
Zawgyi ရန်ကုန်၊ရန်ကင်းဆေးရုံက နပ်စ်မတွေကြောင့် အကြွေစောခဲ့ရတဲ့ သနားစရာ မေမေ့သမီးလေး မွေးမွေးချင်း ရန်ကုန်ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကို တန်းတက်ရတရ်.သမီးလေးကို အဖွားနဲ့ထားခဲ့ပီး ကျွန်မကအိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ရတယ်…. 15ရက်နေ့ ကျွန်မသမီးလေးဆီကို သွားခဲ့တရ်.နောက်နေ့ ဆရာဝန်တွေက နောက်နေ့အောက်စီဂျင် ပိုက်တွေဖြုတ်ပေးပီး ၁နာရီရေ၁ဇွန်းတိုက်ခိုင်းတယ်….
ငွေကြေးကိစ္စ အရေးကြီးသော် အကြွေးကိစ္စ အရေးကြီးသော် ငွေအလိမ်ခံရသော် ..
Zawgyi ငွေကြေးကိစ္စ အရေးကြီးသော် အကြွေးကိစ္စ အရေးကြီးသော် ငွေအလိမ်ခံရသော် ဒီ ယ တြာ လုပ် ပါ လေ….. အ ကြွေး ရ စ ရာ ရှိ တဲ့ သူ
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ
Zawgyi တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့်
Zawgyi မြွေတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရင်တကယ်ကံကောင်းမှာလားအိပ်မက်ပုံအရသင့်ကံကြမ္မာဘာတွေဖြစ်လာတတ်သလဲ ၁။ မြွေကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့အိပ်မက်မက်တဲ့အခါအိပ်မက်ထဲမှာမြွေကကိုယ့်ကိုကိုက်တော့မယ့်ပုံစံပေါက်တော့မယ့်ပုံစံနဲ့လိုက်လာလို့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရတယ်လို့အိပ်မက်မြင်မက်တယ်ဆိုရင်သင့်ထံသို့ကံမကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ၂။ မြွေနဲ့တရင်းတနှီးကစားနေရတယ်လို့မြင်မက်လျှင်သင်ဟာပြင်ပမှာတော့မြွေကိုသေမလိုကြောက်ပေမယ့်အိပ်မက်ထဲမှာမြွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာကစားနေတယ်လို့မြင်မက်တယ်ဆိုရင်သင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့ပြီးမကြာခင်ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ၃။ မြွေအရေခွံလဲတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတယ်လို့မြင်မက်လျှင်အိပ်မက်ထဲမှာမြွေတစ်ကောင်အရေခွံလဲနေတာကိုသင့်မျက်စိရှေ့မှာမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင်မကြာခင်အချိန်မှာသင့်ထံသို့ကောင်းသောဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုတွေရောက်လာတော့မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၄။မြွေကိုသတ်ရတယ်လို့အိပ်မက်မြင်မက်လျှင် အိပ်မက်ထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်မြွေကိုသတ်လိုက်ရတယ်လို့အိပ်မက်မြင်မက်လျှင်သင့်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဆုံးပြဿနာတွေကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူမတူတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးရရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်းနိမိတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ မြွေကသင်ဘယ်သွားသွားနောက်ကလိုက်လာတယ်လို့မြင်မက်တဲ့အခါအိပ်မက်ထဲမှာမြွေကသင်ဘယ်သွားသွားနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့မြင်မက်တာဟာသင့်မှာငိုစရာဝမ်းနည်းစရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၆။မြွေကိုက်ခံရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်လျှင်အိပ်မက်ထဲမှာသင့်ကိုမြွေတစ်ကောင်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်ကိုက်ပြီးသင်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြင်မက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှရှောင်လွဲလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအိပ်မက်မျိုးမြင်မက်ပြီးပြီဆိုရင်မပေါ့ဆသင့်ပဲသတိကြီးစွာနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ ၇။ မြွေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတာကိုအိပ်မက်မြင်မက်လျှင်မြွေအချင်းချင်းရန်သတ်နေတာကိုအိပ်မက်မြင်မက်တယ်ဆိုရင်သင်ပေါင်းသင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာသင့်ကိုမလိုမုန်းထားသူရှိနေပြီလို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရက်ဒစ် Unicode မွှတှေကေိုအိမျမကျထဲမှာမွငျရငျတကယျကံကောငျးမှာလားအိပျမကျပုံအရသငျ့ကံကွမ်မာဘာတှဖွေဈလာတတျသလဲ
Zawgyi တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ထီပေါက်ကံအကျိုးပေးတစ်သက်စာအထူးဟော တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ထီပေါက်ကံအကျိုးပေးတစ်သက်စာအထူးဟေားတနင်္လာသင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ဒီအချိန်မှာအလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချရလိမ့်မည်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမှန်ကန်လိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေတော့အမှန်တွေဖြစ်လာလိမ့်မည်။အောင်မြင်မှု့တွေရရှိလာပါလိမ်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူတိုးမည်။အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေလာမည်။အကြီးအကဲတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါကလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အောင်မြင်မှု့တွေရရှိသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်။သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်အလွန်ရွှင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ရစရာရှိသောကိစ္စများမှာလည်းပြန်လည်ရရှိမည်သင်၏ကျန်းမာရေးကောင်းနေပါသည်။ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ပညာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မည်။ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာလည်းကောင်းပါသည်။ ချစ်သူနှစ်ဦးအပေယူမျှတသောအချစ်ရေးဖြစ်ပါသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မည်။သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်းကောင်းပါသည်။နိုင်ငံခြားခရီးဖြစ်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၃၊၇)ဖြစ်ပါသည်။ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည် ဇော်စိမ်း(၃)ညွန့်၊စံပယ်(၈)ကုံးအိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ ။သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မှယုံကြည်ပါသည်။ခရက်ဒစ် Unicode တနင်ျလာသားသမီးမြားအတှကျထီပေါကျကံအကြိုးပေးတဈသကျစာအထူးဟော တနင်ျလာသားသမီးမြားအတှကျထီပေါကျကံအကြိုးပေးတဈသကျစာအထူးဟေားတနင်ျလာသငျ၏အလုပျအကိုငျမှာကောငျးနပေါသညျ။ဒီအခြိနျမှာအလုပျအကိုငျကိစ်စတှဆေုံးဖွတျခကျြခရြလိမျ့မညျ။အဲဒီဆုံးဖွတျခကျြကလညျးမှနျကနျလိမျ့မညျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈလုပျပတေော့အမှနျတှဖွေဈလာလိမျ့မညျ။အောငျမွငျမှု့တှရေရှိလာပါလိမျမညျ။ဝနျထမျးမြားဖွဈပါကရာထူတိုးမညျ။အလုပျတှလေညျးအဆငျပွလောမညျ။အကွီးအကဲတှရေဲ့မကျြနှာသာပေးခွငျးကိုလညျးခံရတတျပါသညျ။ ယခုအပတျတှငျးလုပျငနျးသဈစတငျလုပျကိုငျပါကလုပျဖွဈအောငျလုပျပါ။အောငျမွငျမှု့တှရေရှိသောအလုပျဖွဈပါသညျ။သငျ၏ငှကွေေးကံမှာကောငျးနပေါသညျ။လာဘျအလှနျရှငျသောအခြိနျဖွဈပါသညျ။ ရစရာရှိသောကိစ်စမြားမှာလညျးပွနျလညျရရှိမညျသငျ၏ကနျြးမာရေးကောငျးနပေါသညျ။ဘာမှစိုးရိမျစရာမလိုပါ။ပညာရေးကံမှာလညျးကောငျးနပေါသညျ။အောငျမွငျမှုတှရေရှိပါလိမျ့မညျ။ငယျရှယျသူမြားဖွဈပါကအခဈြရေးမှာလညျးကောငျးပါသညျ။ ခဈြသူနှဈဦးအပယေူမြှတသောအခဈြရေးဖွဈပါသညျ။အိမျထောငျရှငျမြားအတှကျအိမျထောငျရေးပြျောရှငျမှုတှရေရှိပါလိမျ့မညျ။သငျ၏ပွညျတှငျးပွညျပခရီးကိစ်စမှာလညျးကောငျးပါသညျ။နိုငျငံခွားခရီးဖွဈလြှငျပိုကောငျးပါသညျ။ သငျ၏ကံကောငျးသောအရောငျမှာအစိမျးရောငျဖွဈသညျသငျ၏ကံကောငျစသေောဂဏာနျးမှာ(၃၊၇)ဖွဈပါသညျ။ယခုအပတျအတှကျအကောငျးဆုံးယတွာကိုကြှနျုပျမှညှနျကွားပေးလိုကျသညျ ဇျောစိမျး(၃)ညှနျ့၊စံပယျ(၈)ကုံးအိမျဘုရားလှူပွီးမိမိလိုရာဆုတောငျးပါ
အိမ်အကူချောချောလေးတွေခေါ်ခေါ် မချောတာပဲခေါ်ခေါ် ဒီပို့စ်ကိုသေသေချာချာဖတ်ပြီးမှခေါ်ကြပါ
Zawgyi အိမ်အကူချောချောလေးတွေခေါ်ခေါ် မချောတာပဲခေါ်ခေါ် ဒီပို့စ်ကိုသေသေချာချာဖတ်ပြီးမှခေါ်ကြပါ ဖြစ်စဉ်မှာရန်ကုန်တိုင်းကျောက်တံတား မြို့နယ် —–လမ်း ဒုတိယထပ် အိမ်အမှတ် (___) နေ အားကစား နှင့် ကျန်းမာရေးနည်းပြခန်းမ ဖွင့်လှစ်နေထိုင်သူ နည်းပြဆရာမ ဒေါ်(—-)သည်အိမ်အကူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်မှော်ဘီမြို့နယ် ဘွက်ကြီးကျေးရွာ အုပ်စုမှ(24,12,2019)
အသက်မပြည့်သေးသောမိန်းကလေးတစ်ဦးအား messengerမှ video call ခေါ်ပြီးမိမိ ဆီလာရန်သွေးဆောင်ခေါ် ယူ၍ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
Zawgyi စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ် မုံတော(မ)ကျေးရွာ၌ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်ရှိ အသက်မပြည့်သေးသော မိန်းကလေးတစ်ဦးအား သားမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်သူ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ညောင်ပင်ကြီးစုရဲကင်း စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ်စိုးပိုင်ထွန်း ထံမှ သိရသည်။ (၁၇.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီခန့်က
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်က လင်မယားသေဆုံးမှု အကြောင်းအရင်းအပြည့်အစုံ
Zawgyi ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်က လင်မယားသေဆုံးမှု အကြောင်းအရင်းအပြည့်အစုံ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ် ကေဘယ်ကားတပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်အလုပ်လုပ်နေသော အလုပ်သမားလင်မယားနှစ်ယောက်သည် လွန်ခဲ့သောကြာသပတေးနေ့ညက ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တွင် လျှပ်စီးလက် မိုးကြိုးပစ်၍ လျှပ်စစ်မီးပျက်သွားပြီ မိမိတို့နေထိုင်သောအခန်းမီးလင်းနိုင်ရန်အတွက် အခန်းအတွင်းရှိမီးစက်ကြီးကိုနိုးကာ လျှပ်စစ်မီးများတပ်ဆင်ရာမှ လင်မယား၂ယောက်နှင့် အခန်းအတွင်းရှိခွေးတစ်ကောင်ပါ ဓာတ်လိုက်ပြီသေဆုံးသွားကြပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများကတောင်ပေါ်သို့တက်ရောက်စစ်ဆေးရာ
နေအိမ်၊ ဆိုင်ခန်း ငွေမ၀င်ဖြစ်နေလျှင် (အိမ်ခန်းဆိုင်ခန်းလာဘ်တိတ်နေသူများအတွက်)
Zawgyi နေအိမ်၊ ဆိုင်ခန်း ငွေမ၀င်ဖြစ်နေလျှင် အိမ်ခန်းဆိုင်ခန်းလာဘ်တိတ်နေသူများအတွက် ဆရာအိမ်မှာလာဘ်တိတ် နေလား မသိဘူးငွေမဝင်တာကြာပြီ လုပ်အားခတွေကမရ သူများဆီ ချေးထားတွေကမရနဲ့ အိမ်မှာငွေမမြင်ရတာကို ကြာပါပြီစသောသူတွေ အတွက်တချို့လည်အိမ်ကကျက်သရေမရှိသလို ဖြစ်နေစသောသူတွေအတွက်ဆိုင်တွေ မှာဆိုလာဘ်တိတ် သွားတာနည့် ရောင်းအား တခါထဲထိုးကျသွားပြီးငွေဝင်မည့်အကြောင်းကံများပိတ်သွားလေတော့သည်။ ဘယ်သူပဲ